Collaboration – Page3– OOTDMYANMAR
THE PINK DRESS TO LOVE THIS MAY
1 Comment on THE PINK DRESS TO LOVE THIS MAY
May လ နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ပန်းရောင်ဂါဝန်
The weather in Yangon is just too hot to handle. But wearingadress is the best option. It’s less constricting than pants and more comfortable than shorts. Find out our top pick dress that you can almost pair with anything plus, it’s been worn by our favorite fashionistas in Myanmar.
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရာသီဥတု က သည်းမခံနိုင်လောက်အောင် ပူလွန်းလှပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဂါဝန်လှလှလေးဝတ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ ဂါဝန်တွေက ဘောင်းဘီတွေဝတ်ရတာထက် ပိုလွတ်လပ်ပြီး အတိုလေးတွေဝတ်တာထက်လည်း ပိုသက်သောင့်သက်သာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် OOTD ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး fashionista တွေ ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ထဲကမှ ဘယ်လိုစတိုင်မျိုးနဲ့မဆို လိုက်ဖက်တဲ့ အကြိုက်ဆုံး ပန်းရောင်ဝတ်စုံလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
The Migen Contrast knit dress isadress perfect for they hot weather.
Migen Contrast knit dress လေးက ဒီလိုပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးပါပဲ။
Photo credits @kst_yamin
Photo Credits @thandarbo_boyit
Photo Credits @ootdmyanmar
Shop for it at https://www.facebook.com/commerce/products/2748454568535729/
Make sure to DM us or tag us if you post an OOTD wearing this dress! =)
ဒီအင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ပုံလေးကို တင်မယ်ဆိုရင်တော့ OOTD ကို တိုက်ရိုက် message ပေးပို့တာဖြစ်ဖြစ်၊ tag တွဲတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
By the way, MDS is having their Summer sale 20% off at shop.com.mm
ဒါနဲ့စကားမစပ် MDS က shop.com.mm မှာSummer sale 20% discount ပေးနေတယ်နော်။
Also, they will be having another live session in there Facebook this Wednesday.
ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကျရင်လည်း သူတို့ရဲ့ page မှာ နောက်ထပ် live session ရှိပါသေးတယ်။
SIMPLE WAYS TO ENJOY VALENTINE’S DAY
No Comments on SIMPLE WAYS TO ENJOY VALENTINE’S DAY
Valentine’s Day is special day we should celebrate.
ချစ်သူများနေ့ဆိုတာ လူတိုင်းဖြတ်သန်းသင့်တဲ့ ထူးထူးခြားခြားနေ့လေးပါ။
However, at times we are at loss on what to do.
ဒါပေမယ့် ချစ်သူများနေ့ ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
Whether we havealimited budget, or just running out of ideas, we haveacommon goal — to let our partner feel special on this day.
အပိုငွေသုံးစရာအဆင်မပြေပေမယ့်၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို ချစ်သူများနေ့မှာ အမှတ်တရလေးဖြစ်သွားအောင်တော့ လူတိုင်းလုပ်ပေးချင်ကြပါတယ်။
So, here are simple yet sweet recommendations for you:
အဲ့ဒါကြောင့် ရိုးရှင်းပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
#1 BUY A STUFF TOY / ချစ်သူကောင်မလေးကို အရုပ်ဝယ်ပေးခြင်း
Photo credits @travelkueen
#2 WEAR A MATCHY-MATCHY OUTFIT /အဝတ်အစားဆင်တူဝတ်ခြင်း
#3 GO CAMPING /နှစ်ယောက်အတူ camp ထွက်ခြင်း
#4 PREPARE BREAKFAST/ နံနက်စာပြင်ဆင်ပေးခြင်း
#5 GIVE A BOOK / စာအုပ်လက်ဆောင်ပေးခြင်း
#6 DO A PHOTOSHOOT/ အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း
#7 TAKE A BREAK FROM THE CITY /မွန်းကျပ်တဲ့မြို့ပြကနေ ခေတ္တအနားယူခြင်း
#8 GIVE A PET /အိမ်မွေးတိရစာ္ဆန်လက်ဆောင်ပေးခြင်း
Remember it is always the thought that counts. Havealovely Valentine’s Day loves!
လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေထက် ကိုယ့်လက်တွဲဖော်အပေါ်ထားတဲ့စိတ်ကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ချစ်သူများနေ့ ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ !
Tags heartsday, ootdmyanmar, travelkween, Valentinesday
FASHIONISTA OF THE WEEK: RACHEL
No Comments on FASHIONISTA OF THE WEEK: RACHEL
Rachelaworking student shows us how to rockanude brown ensemble.
အလုပ်လုပ်ရင်းကျောင်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသူလေး Rachel က nude brown ကို ဆန်းသစ်ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Photo by @joamarjohn
Watch her share her fashion advices here:
ဘယ်လိုဆန်းသစ်ထားလဲ Rachel ရဲ့ fashion နဲ့ပက်သက်တဲ့အကြံပေးစကားတွေကဘာတွေလည်းဆိုတာသိရဖို့ ဒီ link လေးကို နှိပ်လိုက်ပါနော်။
WHAT TO WEAR FOR CHINESE NEW YEAR IF YOU DON’T HAVE AN OUTFIT YET
No Comments on WHAT TO WEAR FOR CHINESE NEW YEAR IF YOU DON’T HAVE AN OUTFIT YET
Chinese New Year is around the corner and if you’ve run out of ideas on what to wear for Chinese New Year — don’t panic. MDS Myanmar is here to the rescue.
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် က နီးကပ်လို့လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဝတ်စရာဝတ်စုံလှလှလေးမရှိလို့စိတ်ညစ်နေလား။ မပူပါနဲ့။ စိတ်ညစ်နေတာတွေကိုဖြေဖျောက်ပေးဖို့ MDS Myanmar ရှိပါတယ်။
We have curated our top pick from their collection that would help you looking likeastyle star.
စတားတစ်ယောက်လို စတိုင်ကျသွားစေဖို့ MDS ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးဝတ်စုံတချို့ကိုရွေးပေးထားပါတယ်။
As you know, Chinese believes that wearing new clothes on CNY isasign ofafresh start. And red symbolizes good fortune and joy.
တရုတ်လူမျိုးတွေက နှစ်သစ်ကူးမှာအဝတ်သစ်ဝတ်ဆင်ခြင်းဟာ လန်းဆန်းတက်ကြွစေတဲ့အစပြုမှုလို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အနီရောင်က ကံကောင်းခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုပာတယ်။
So, here are five red looks you can wear during this joyous occasion.
အဲ့ဒီတော့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မှာဝတ်ဆင်ဖို့ အနီရောင်ဝတ်စုံလှလှလေးငါးစုံကိုရွေးပေးလိုက်တယ်နော်။
Stacie Red Peplum Toga Top at KS 59,000
Darlton Pleated-Hem Red Dress at KS 55,000
Racquel Flutter Maroon Floral Dress at KS 49,000
Aldos Ruffled Red Dress at KS 65,000
Bellari Red Lace Dress at KS 65,000
By the way MDS has their Chinese New Year Promotion. “Buy 80,000 Ks, Get “Ang Pao” including 8,000 Ks, 10,000 Ks, 15,000 Ks Gift voucher (which can use for the next time purchase) from Jan 17 to 31 at all MDS Myanmar Stores & Online.
ဒါနဲ့ စကားမစပ် MDS က Chinese New Year Promotion အဖြစ် ရှစ်သောင်းကျပ် ဖိုး ဝယ်ယူသူတိုင်းကို ရှစ်ထောင် ကနေ တစ်သောင်း၊ တစ်သောင်းခွဲ အထိ အံပေါင်း တွေ ပေးနေပြီနော်။ အဲ့ဒီ အံပေါင်း တွေကိုတော့ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ကနေ ၃၁ အထိ MDS Myanmar ဆိုင်ခွဲတိုင်း သာမက Oline မှာ ဝယ်ယူအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
Happy shopping and don’t forget to tag us with your CNY OOTDs.
ဈေးဝယ်ကံစမ်းရင်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမှာ ဝတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ပုံတင်ရင် OOTD tag ပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
Join 112,090 other followers